Ny indostrian'ny Telecom dia ampahany manan-danja tokoa amin'ny sehatry ny generator. Amin'ny maha orinasa iraisam-pirenena azy, MAMO dia nifantoka tamin'ny famolavolana, fanamboarana ary fanamboarana ireo rafitra famokarana herinaratra sy ireo vahaolana momba ny angovo efa mandroso. Manohana ny fanohanan'ny mpivarotra manam-pahaizana eto an-toerana, MAMO Power no mpamatsy marika manerana an'izao tontolo izao izay nitodika tany amin'ny famatsiana herinaratra lavitra azo itokisana sy azo antoka.
Miaraka amin'ny traikefa iasan'ny mpandraharaha maojor telecom maro, MAMO dia mandinika bebe kokoa ny henjana sy ny fiarovana ny asan'ny genset.
Ny rafitra fanaraha-maso MAMO manolotra fonosana fifandraisana lavitra, ny teknolojia patanty tsy mety dia avelan'ny mpanjifa manara-maso sy mifehy ny fitaovana avy amin'ny birao na amin'ny toerana hafa.
Betsaka ny fonosana fanaraha-maso ankehitriny no manasongadina fampiharana finday marani-tsaina izay manome fidirana amin'ireo masontsivana napetraky ny mpamorona tsirairay ary miteraka fampandrenesana ny olana rehetra eo amin'ny tranokala.